उपराष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्दै प्रचण्ड र बाबुरामबीच ‘गोप्य’ भेटवार्ता, के पाक्दैछ खिचडी ? - Media Dabali
काठमाडौं – संसद विघटनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भइरहेका बेला पूर्व माओवादीमा सहकर्मी रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग गोप्य भेटवार्ता गरेका छन् ।
उपराष्ट्रपति पुनलाई भेट्न प्रचण्ड र बाबुराम लैनचौर पुगेका थिए । शुक्रवार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काठमाडौंमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गरेलगत्तै प्रचण्ड उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौर पुगेका स्रोतले जनाएको छ ।
कैलालीको टीकापुर लगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी भएर शुक्रबार मात्रै काठमाडौं आइपुगेका भट्टराई समेत उति नै बेला लैनचौर पुगेका थिए ।
प्रचण्ड र बाबुरामले संयुक्त रूपमा उपराष्ट्रपति पुनसँग आधा घण्टा कुराकानी गरेको जनाइएको छ । के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने खुलाइएको छैन ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तह लगाएपछि उनी बाबुरामसँग नजिकिँदै गएका छन् । प्रचण्डबाट छुट्टिएर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुराम अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पुगेका छन् ।
केही हप्ताअघि पनि लैनचौरमै प्रचण्ड र बाबुरामबीच छलफल भएको जनाइएको छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड र बाबुराम नजिकिँदै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने बताइरहेका प्रचण्ड र बाबुरामले उपराष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर छलफल गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक संकटका बेला प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारी निवास पुग्ने गरेका थिए ।